Olona Firy no Nahazo Ny Lokan’ny Fihaonana an-Tampon’ny Nobel-n’ny Fandriampahalemana sy ny Grammy Latina Tao Anatin’ny Herinandro Iray? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Desambra 2015 18:01 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Aymara, Türkçe, English
Sary nalefan'i Rene Perez Joglar (@residente) tamin'ny 15 Novambra 2015 at 9:17am PST.
Nahazo ny Lokan'ny Fihaonana an-tampon'ny Nobel Fandriampahalemana nandritra ny lanonana ofisialy tamin'ity taona ity i René Pérez Joglar, fantatra kokoa amin'ny hoe Residente (@Residente) avy amin'ny tarika malaza an-tanandehibe Calle 13, izay notontosaina tao Barcelona, Espaina tamin'ny 15 Novambra. Sambany natolotra ho an'ny Amerikana Latina ity voninahitra ity.
Natolotra noho ny fankasitrahana ny fikatrohan'i Pérez Joglar, izay tanterahiny indrindra amin'ny alalan'ny hira ahitana tononkira miresaka olana maro ny loka, anisan'izany ny mari-panondroana Amerikana Latina, ny fanavakavaham-bolokoditra, ny fifindramonina ary ny rariny ara-toekarena.
Ny Lokan'ny Fihaonana an-tampon'ny Nobel Fandriampahalemana dia toera-pihaonana iray ifanakalozan-kevitra amin'ireo olana goavana miantraika amin'ny fiainan'ny olona an-tapitrisany manerantany: ny fahantrana, ny fitantanan-drano, ny tsy fisian'ny fahaiza-mitondra tena eo amin'ireo mpitarika ara-politika iraisampirenena ary ny olana maro hafa.
Hoy ny habaky ny Fihaonambe:
Isan-taona ny Fihaonana an-tampony dia atrehin'ireo mendrika tamin'ny Loka Nobel sy ireo olo-malaza manerantany, izay mavitrika amin'ny sehatra ara-tsosialy, ara-tsiantifika, ara-politika ary ara-kolontsaina
Tamin'ny lahatenim-pakasitrahana nataony, nilaza ny eritreriny amin'ny atao hoe fandriampahalemana sy ny fomba ahafahan'ny olona mikolokolo izany i Pérez Joglar:
Hatramin'ny fotoana voalohany, ny opa voalohany, hatramin'ny nifohazantsika vao maraina sy nanopantsika izany olona voalohany izany, dia mihena ny fandriampahalemana. Ny fandriampahalemana dia zavatra maty isan'andro ary amin'izay fotoana izay dia mitsanga-ko velona isan'andro ihany koa. Satria maro kokoa ny olona tsara fanahy manerantany noho ny olon-dratsy.
Nanandratra ny feony tamin'ny anton-javatra marobe nandritra ny taona maro i Pérez Joglar izay Poerto Rikana, anisan'izany ny fanentanan'ny UNICEF ampitsahatra ny fanondranana olona, sy ny famotsorana ilay gadra politika Poerto Rikana Oscar López Rivera [mg]. Nanohana ireo mpianatra tao amin'ny Anjerimanontolon'i Poerto Rico tamin'ny fihetsiketsehan'izy ireo nandritra ny vanim-potoana nitondran'i Luis Fortuño sy nanohana ny fianakavian'ireo mpianatra Ayotzinapa 43 nanjavona tao Meksika [mg] ihany koa izy.
Ankoatra ny herinandro iray toa zaton'ny tarika Calle 13, nahazo ny loka Grammy Latina ho an'ny Lahatsarin-kira Fohy Tsara Indrindra ihany koa ny rakikiran'izy ireo, “Ojos loko Sol” (“Maso Lokon'ny Masoandro”). Efa olona maherin'ny 40 tapirisa sahady no nijery ny horonantsarin'ny hira, izay niaraha-nanoratra tamin'ilay olomanga Kiobàna, Silvio Rodriguez, tao amin'ny Youtube.